C , c++ နှင့် c# စာအုပ်များ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Programming Languages - 1 » C Programming » E-books များ
C , c++ နှင့် c# စာအုပ်များ
25-02-2010, 04:41 AM
မနက်က ကျွန်တော် ဆိုဒ်ထဲ ခဏ ဝင်ကြည့်ဖြစ်တော့ စကားဝိုင်းထဲမှာ C# တောင်းနေတာ တွေ့မိတာနဲ့ လက်ထဲ လတ်တလော ရှိနေတဲ့ စာအုပ်နည်းနည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်အုပ်ချင်းဒေါင်းလုပ်လင့်တော့ မရေးပြတော့ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော် ifile မှာ တင်ပြီး အားလုံးကို လိုချင်တဲ့သူယူဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ Public ပေးထားခဲ့တယ်။ ပါတဲ့ စာအုပ်စာရင်းကတော့ ဒီမှာပါ။
Last edited by KznT; 05-11-2010 at 09:25 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 22 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, မိုးလွင်, လမ်းပြကြယ်, သက်တန့်, ဧရာဝတီ, ဇော်ရဲပိုင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်ကို, မောင်ပေါ်ဦး, ပြည်ဖြိုးကျော်, bonge, frogfish, kankoung, kyaukphyu, lamin.pzl, minthumon, nayzawaung, nyowin, thurein, tu tu, zo
25-02-2010, 05:08 AM
ပို့စ် 1,304 ခုအတွက် 6,794 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - C , c++ နှင့် c# စာအုပ်များ
ကျွန်တော်လည်း ဒေါင်းထားတာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
တကယ်စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာဟာ တစ်ဖက်သားအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာကို လိုလားတယ်
Facebook တွင် ဖတ်ရှု့လိုပါက......
Lord Buddha The Unrivalled
Last edited by ဇော်ရဲပိုင်; 25-02-2010 at 05:11 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, လမ်းပြကြယ်, ဧရာဝတီ, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, aungphyo, bonge, KznT, nwmgmg, nyowin, soekyawthuaung, thurein, thureinsoe, zo
Visit ဇော်ရဲပိုင်'s homepage!
Find More Posts by ဇော်ရဲပိုင်
ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ အခုလိုမျှဝေးပေတဲ အတွက် နောက်လည်း ဆက်ပြီ မျှဝေနိူင်ပါစေ
Find More Posts by navyaung
တည်နေရာ: ဟိုက်ယင်းမြို့ &
ပို့စ် 388 ခုအတွက် 2,277 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမှန်းတောင်မသိသေးဘူး ....... နောက်လည်းတင်ပေးကြပါအုံး......
Find More Posts by ဦးသာကြီး
22-08-2011, 05:41 PM
ကျွန်တော်က အခုမှစလေ့လာနေသူဆိုတော့ အသုံးဝင်ပါတယ် ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ပါတယ် နောက်လည်း တင်ပေးပါအုန်း ။
Find More Posts by ပြည်ဖြိုးကျော်
ဒေါင်းလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် . ကူညီပါအုံး.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Find More Posts by kankoung
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Mar 2011
ပို့စ် 29 ခုအတွက် 90 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
No such tag file လို့ပြောပါတယ်..
Find More Posts by ဆလိုင်းသန့်ဇော်ဝင်း
30-08-2012, 07:46 PM
ပို့စ်7ခုအတွက် 14 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
တန်ဘိုးဖြတ်မရတဲ့စာအုပ် ယူထားကြ ကျနော်ကတော့ယူပြီဗျို့:bh:
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ၀င်းနိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ၀င်းနိုင်
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jan 2018
Find More Posts by Mr.PyaePhyoe
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 02:36 PM